Siyaasadda Qarsoonnimada Shabakadda - Shuraakada Oregon-Gaajo-la'aanta
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Shabakadda
Siyaasaddan sirnimadu waxay dejinaysaa sida Partners for a Hunger-Free Oregon u isticmaalaan oo ay u ilaaliyaan macluumaad kasta oo aad siiso Partners for Hunger-Free Oregon marka aad isticmaasho website-kan. Partners for Hunger-Free Oregon waxaa ka go'an inay hubiyaan in sirtaada la ilaaliyo. Haddii aan ku waydiino inaad bixiso macluumaad gaar ah oo lagugu aqoonsan karo markaad isticmaalayso website-kan, markaa waxaa laguu xaqiijin karaa in loo isticmaali doono oo kaliya si waafaqsan bayaanka sirta ah. Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta ayaa laga yaabaa inay beddelaan siyaasaddan waqti ka waqti iyagoo cusbooneysiinaya boggan. Waa inaad hubisaa boggan waqti ka waqti si aad u hubiso inaad ku faraxsan tahay isbeddel kasta. Siyaasadani waxa ay dhaqan galaysaa laga bilaabo February 26, 2010
Waxa aynu u ururiyaan
Waxaa laga yaabaa inaan u ururiyaan macluumaadka soo socda:
magaca iyo shaqada shaqo
la xiriir macluumaad oo ay ku jiraan cinwaanka email
xogta dadka sida koodhka boostada, la door iyo danaha
macluumaadka kale ee khuseeya sahanka, codsiyada, iyo foomamka kale
Maxaannu ku samaynaa macluumaadka aan soo ururiyo
Waxaan u baahan tahay macluumaad this si ay u fahmaan baahiyahaaga oo ay kuu siiyaan adeeg fiican, iyo gaar ahaan sababaha soo socda:
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadka si loo hagaajiyo alaabta iyo adeegyadayada.
Waxa laga yaabaa inaan si wakhtiyo ah u soo dirno iimaylka ku saabsan wararka, ogaysiisyada ficilka, ama macluumaadka kale ee aanu u malaynayno inaad ka heli karto mid xiiso leh addoo isticmaalaya ciwaanka iimaylka ee aad bixisay.
Waqti ka waqti, sidoo kale waxaan u isticmaali karnaa macluumaadkaaga si aan kula soo xiriirno ujeedooyin cilmi baaris. Waxaa laga yaabaa inaan kugula soo xiriirno iimayl, taleefan, fakis ama boosto.
Waxaa laga yaabaa inaan u isticmaalno macluumaadka si aan u habeyno mareegaha iyadoo loo eegayo danahaaga.
Marna ma iibin doono macluumaadkaaga.
Waxaa naga go'an inaan hubinno in macluumaadkaagu yahay mid sugan. Si aan uga hortagno galitaanka ama daah-furka aan la ogalayn waxaanu dejinay habraacyo jidheed, elegtaroonig ah iyo maamul oo ku habboon si loo ilaaliyo loona sugo macluumaadka aanu ku ururinay khadka.
Sida aynu u isticmaalaan cookies
Kukigu waa fayl yar oo codsanaya ogolaansho in lagu dhejiyo darawalka adag ee kombiyuutarkaaga. Markaad ogolaato, faylka ayaa lagu daraa oo buskudku wuxuu kaa caawinayaa falanqaynta taraafikada shabakada ama wuxuu ku ogeysiinayaa markaad booqato goob gaar ah. Kukiyadu waxay u oggolaadaan codsiyada shabakada inay kuugu soo jawaabaan shakhsi ahaan. Codsiga webka waxa uu hawlihiisa ku waafajin karaa baahiyahaaga, waxa aad jeceshahay iyo waxa aad necebtahay adiga oo ururinaya oo xasuusanaya macluumaadka ku saabsan waxa aad door bidayso.
Waxaan isticmaalnaa cookies log log si loo garto boggaga la isticmaalayo. Tani waxay naga caawinaysaa inaan falanqayno xogta ku saabsan taraafikada bogga shabakadda oo aan horumarino mareegahayaga si aan ugu habbono baahiyaha macaamiisha. Waxaan kaliya u isticmaalnaa macluumaadkan ujeedooyinka falanqaynta tirakoobka ka dibna xogta ayaa laga saarayaa nidaamka.
Guud ahaan, kariimadu waxay nagu caawinayaan inaan ku siino bogga internetka, adoo na siinaya si aan ula socono bogagga aad ka heli karto faa'iido badan oo aanad samayn. Cookie ma jirto si aan u helno kombuyutarkaaga ama macluumaad kasta oo adiga kugu saabsan, oo aan ahayn xogta aad xulato inaad nala wadaagto.
Waxaad dooran kartaa inaad aqbasho ama aad diido cookies. Badankood websaydhadu waxay si toos ah u aqbalaan cookies, laakiin inta badan waad badali kartaa barta shabakadaada si aad u diido cookies haddii aad doorbideyso. Tani waxay kaa horjoogsan kartaa inaad ka faa'iideysato bogga internetka.
Links inay websites kale
Mareegahayaga waxaa ku jiri kara xiriiriyayaal awood kuu siinaya inaad si fudud u booqato mareegaha kale ee xiisaha. Si kastaba ha noqotee, marka aad isticmaasho xiriiriyeyaashan si aad uga baxdo boggayaga, waa inaad ogaataa inaanaan wax xakameyn ah ku haynin degel kale. Sidaa darteed, mas'uul kama noqon karno ilaalinta iyo sirnimada macluumaad kasta oo aad bixiso marka aad booqanayso bogaggan iyo goobahan oo kale aan lagu maamulin bayaanka qarsoodiga ah. Waa inaad taxaddar muujisaa oo aad eegtaa bayaanka siraha ee lagu dabaqi karo mareegaha su'aasha.
Xakamaynta macluumaadkaaga shakhsiyeed
Ma iibin doono, u qaybin mayno ama ka kirayn doono macluumaadkaaga khaaska ah cid saddexaad ilaa aan haysano ogolaanshahaaga ama uu na farayo sharci. Waxaa laga yaabaa inaan u isticmaalno macluumaadkaaga gaarka ah si aan kuugu soo dirno macluumaadka xayeysiinta ee ku saabsan dhinacyo saddexaad oo aan u maleyneyno inaad ka heli karto mid xiiso leh haddii aad noo sheegto inaad rabto inay tani dhacdo.
Waxaad codsan kartaa faahfaahinta macluumaadka shakhsiyeed ee aanu ku hayno adiga oo hoos imanaya Xeerka Ilaalinta Xogta ee 1998. Kharash yar ayaa la bixin doonaa. Haddii aad rabto nuqul ka mid ah macluumaadka lagugu hayo fadlan u qor Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta, PO Box 14250, Portland, AMA 97293.
Haddii aad aaminsan tahay in macluumaad kasta oo aan la haysta aad on waa sax ahayn ama aan dhameystirneyn, fadlan u qor ama email noogu sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, cinwaanka kor ku xusan. Waxaan si dhakhso ah edbin doonaa macluumaad kasta oo la ogaaday in aan sax ahayn.